Home > समाचार > राजनिती >
२३ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:५१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्न २०७५ जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै पार्टीका अध्यक्षले कार्यकर्तालाई हौस्याउन किस्सा र टुक्का सुनाएका थिए ।
केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेको विम्ब अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको विषय बनिरहन्छ– नेकपा जेट । एउटा पार्टीमा दुई अध्यक्षको अनौठो शैलीलाई कतिपयले व्यंग्य गरेपछि ओलीले भनेका थिए– ‘टेम्पु हो र ? जहाज उडाउन दुई पाइलट चाहिन्छ नि !’
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ विज्ञानको फर्मुलाको उदाहरण दिँदै सोही दिनबाटै नेकपा अन्तरघुलन भएको दाबी गर्दैै भनेका थिए– ‘हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बनेपछि त्यसबाट एक अर्कालाई अलग गर्न सकिँदैन ।’
त्यति नै बेला पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका एक नेताले एमाले र माओवादीलाई जोड्ने कसी गोबर भएको र यसले दुई धातुलाई लामो समय जोडिराख्न सक्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
पार्टी एकीकरणको अढाइ वर्षमा दुवै जना एक अर्काका लागि ‘घाँडो’ बनिरहेका छन् । जहाजका क्याप्टेनलाई ‘को पाइलट’ले जहाज अर्कैतिर मोड्न खोज्ने आशंका देखिन्छ । ककपिटमा बसेका पाइलटको झगडाका कारण नेकपा नामक जेट टर्बुलेन्समा परेको छ ।
४८ घण्टे अल्टिमेटमको अन्तर्य
अढाइ वर्षअघि समान हैसियतमा पार्टी एकता घोषणा गरेका ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध अहिले तिक्ततापूर्ण बिन्दुमा पुगेको छ । तिक्तता यतिसम्म कि सचिवालय सदस्यकै अगाडि ओली प्रचण्डले एक अर्कालाई धोकेबाजको संज्ञा दिन थालेका छन् । ओलीले आफू प्रथम अध्यक्ष र प्रचण्डलाई द्वितीय अध्यक्षको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । तर उनले आजपर्यन्त कार्यकारीको ‘फिलिङ’ गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत बैठक बोलाउन ज्ञापनपत्र लिएर अर्का अध्यक्षलाई भेट्न बालुवाटार जानुपर्ने अवस्था आउँदा पूर्व माओवादीका कार्यकर्ता अत्यन्त निराश देखिएका छन् ।
ओलीले पार्टी एकताको समयमा जे भनिएको भएपनि नेकपाको लाइन जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नै हो भन्ने खालको भनाइ अहिले सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘प्रचण्डले माओवादी पार्टी एमालेमा विलय गराएको गोपाल किरातीहरूको आरोप अहिले आएर पुष्टि हुँदैछ,’ पूर्व माओवादी खेमाका नेकपा केन्द्रीय सदस्यले गुनासो सुनाए ।
ओली र प्रचण्डको स्वार्थ मिल्दा तत्कालीन दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सम्भव भएको थियो । कयौं विमतिका बावजुद कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गर्ने कुरामा दुवै पार्टीका नेताले विरोध जनाउन सकेनन् । पर्याप्त गृहकार्यविना गरिएको एकताले संकट निम्त्याउने कतिपय नेताले त्यतिबेला नै आशंका गरेका थिए । अहिले बैठक राख्नका लागि ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
शनिवार दिएको ४८ घण्टाको आधा समय घर्किएको छ । अबको २४ घण्टापछि नेकपामा के हुन्छ भनेर अहिल्यै पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ । ओली–प्रचण्ड दुवै समूह ब्याक नहुने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण दोस्रो तहका नेताले गरिरहेका छन् । आफ्नो सहमति बेगर कुनै बैठक बोलाए त्यो पार्टी विभाजनको बिन्दु हुने भनेर ओलीले प्रचण्डलाई चेतावनी दिइसकेका छन् ।
यो अवस्थामा प्रचण्ड समूह हतारमा बैठक बोलाइहाल्न हच्किने सम्भावना छ । र, प्रचण्डले बैठक बोलाइहाले स्वयं पूर्व माओवादीका नेताहरू उपस्थित हुनेमा सन्देह छ ।
फुट्नलाई छैन कुनै महाकाली सन्धि !
कहिले काहीँ नेकपाभित्रको विवाद यति उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ कि–अब ओली–प्रचण्ड मिल्न सक्दैनन्, नेकपा विभाजन हुन्छ । तल्लो तहका कार्यकर्ताबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरू भइहाल्छ । बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरेपनि नेकपा विभाजन गर्ने र अलग पार्टी बनाउने ताकत र शौर्य नेकपाको नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतामा छैन् ।
यदाकदा प्रचण्ड स्वयंले पनि पुनः माओवादी जन्मिने घुर्की नलगाएका होइनन् । पार्टीभित्र आफूलाई कर्नरमा पार्न खोजिएपछि २०७५ माघ २५ गते रुकुम पश्चिमका कार्यकर्तालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए– ‘बिस्तारैबिस्तारै अब माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन ठूलो लडाईं हुनसक्छ ।’
यो नेकपामा कर्नरमा पर्दाको प्रचण्ड आक्रोश थियो ।
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा गत साउन ९ गते पुष्पलालको स्मृति कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए– ‘सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले लिने एकता, संघर्ष र रूपान्तरण हो । त्यसका आधारमा नयाँ एकता गर्ने हो । यसो नहुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फूट आएको छ, विश्वले धेरै देखेको छ, आदर्शवादी भ्रममा हुनुपर्ने देखेको छैन ।’
आफू कर्नरमा पर्दा र कार्यकर्ताको आत्मबल बढाउन प्रचण्डले यस्ता भाषण गरेपनि उनी पार्टी विभाजनका लागि तयार छैनन् । उनलाई बुझेकाहरूका अनुसार पार्टी विभाजनको ठूलो चोट उनले नै व्यहोरेका छन् । २०६४ को चुनावमा कांग्रेस र एमाले जोड्दा पनि नभेटाउने हैसियतको माओवादी विभाजनका कारण २०७० सालको चुनावमा आइपुग्दा उसको हैसियत तेस्रोमा खुम्चिएको थियो ।
पार्टीको पछिल्लो विवादबारे दोस्रो तहका र सूचना राख्ने नेताहरूसँग सम्पर्क गर्दा र कुरो बुझ्दा दुवै पक्ष विभाजनको मूडमा छैन । एकले अर्कोलाई विभाजनकारी र फूटपरस्तको आरोप लगाएपनि कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गरेको अपजस लिन कोही तयार छैनन् । अहिले समस्याको रूपमा चित्रित गरिएका प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि पार्टी एकता भंग होस्, प्रचण्डहरू बाटो लागुन् भन्ने पक्षमा छैनन् ।
‘विभाजन हुँदा त पूर्व एमाले र माओवादी भन्ने कित्ता छुट्टिँदैन, तर ढुक्क हुनुस् पार्टी विभाजनबाहेक नेकपामा सबथोक हुन्छ,’ नेकपाका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
विभाजनका कारण विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक बनेको समयमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले सुविधाजनक सरकार चलाएर विश्वलाई सन्देश दिइरहेको छ । यो हाइटको नेकपा विभाजन गरेको अपजश व्यहोरेर कोही ‘भिलेन’ बन्न तयार छैनन् । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो सरकार भएकै कारण चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
लामो समय एकल नेतृत्वमा रहेको र सरकार गठन विघटनका ‘किङमेकर’ प्रचण्ड अहिले राजनीतिक इतिहासमा कमजोर खेलाडी बनेका छन् । उनी नेकपाभित्र अपमानित र भूमिकाविहीन बन्न पुगे जस्तो देखिँदैछ । यदाकदा नेकपाभित्र ‘पूर्व एमाले’ एकठाउँमा उभिने कुराले उनलाई चस्का पसेको देखिन्छ । परिबन्धले प्रचण्डलाई यस्तो ठाउँमा पुर्‍याइदिएको छ कि उनी चाहेर पनि नेकपाबाट बाहिरिन सक्दैनन् ।
जतिजति बेला प्रचण्ड कर्नरमा पर्छन्, जनयुद्ध लडेको तप्काले वैद्यदेखि विप्लवसम्म एक ठाउँमा हुने परिकल्पना गर्छन् । असम्भव नभएपनि त्यो सहमति फलामको च्युरा जस्तै बनेको छ । प्रचण्डले ‘नक्कल गरेर प्रचण्ड नबनिने’ भन्दै विप्लवलाई नेकपामा आउन आग्रह गर्दै आएका छन् । अहिले केपी ओली कित्तामा गएका नेताहरू भन्न थालेका छन्– ‘हिजो प्रचण्डले भन्नु भएको होइन माओवादी पार्टी विघटन भएर नेकपा बनेको हो ? अहिले फेरि नयाँ पार्टी कसरी बन्न सक्छ ?’
कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनका लागि बहाना चाहिन्छ । अहिले ओली पक्ष र प्रचण्डपक्षबीच देखिएका मतभेद कुनै सैद्धान्तिक मतभेद होइनन् । नेकपा सांसद गोकुल बाँस्कोटाको भनाइलाई मान्ने हो भने अहिलेको विवाद व्यापारिक लेनदेन जस्तो हो, कुनै सम्झौतामा टुंगिन्छ । बाहिर भनिएजस्तै तीन मन्त्रीको नियुक्ति, तीन राजदूतको सिफारिश जस्ता विषयले नै ।
ओली–प्रचण्ड अहिले देखिएको भनिएका विषय तपसिलका कुरा हुन् । नेकपाभित्र अहिले देखिएको ज्वरोको कुनै सैद्धान्तिक विषय छैन । केही राजदूत नियुक्ति र मन्त्री नियुक्तिका कारण शुरू भएको विवादमा स्वयं प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहका नेताहरू पनि भिड्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् ।
अन्य साना पार्टीको विभाजन पद प्रतिष्ठाकै कारण भएपनि अहिलेसम्म नेपालका दुई ठूला पार्टी एमाले र माओवादी एजेण्डाका कारण फुटेका थिए । तत्कालीन एमाले फूटको कारण जगजाहेर थियो– महाकाली सन्धि र माओवादी फूटको कारण थियो सैद्धान्तिक विवाद । तर अहिले नेकपा विभाजनका लागि ‘महाकाली सन्धि’ जस्तो कुनै ठोस बहाना छैन ।
नेकपाभित्रको विवादका कारण अन्य पार्टीका कार्यकर्ता र राजनीतिमा चासो राख्नेहरू तरंगित बन्दा पनि स्वयं नेकपाका नेताहरू ‘कुल’ छन् । ‘विवाद यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ, त्यहाँ केही न केही लेनदेन गर्नुपर्छ । फेरि कम्परमाइज गरेर निकास भेटिन्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह भन्छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त, भोलि साढे २ बजे सपथ २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:५१
नेपाली सेनाको टोलीद्वारा आमादब्लम हिमालको सफल आरोहण २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:५१
राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो, प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी परेन २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:५१
उदाउँदै देशकै ठूलो वाणिज्य बैंक, हिमालय एन्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंक २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:५१
१६ वडाको सहयोगमा कुमारीको नयाँ आसन २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १४:५१